नेपाल लाइफको प्रत्येक वर्ष बीमाङ्कको ५ प्रतिशत फिर्ता, ९० प्रतिशत ऋण पाउने नयाँ बीमा योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले ‘सदावहार जीवनका लागि सदावहार जीवन बीमा योजना’ भन्ने नाराका साथ ‘नेपाल लाइफ सदावहार जीवन बीमा योजना’ सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले चैत २६ गते आइतबार देखि..
अब ऋण लिन बैंक जानु पर्दैन, घरबाटै सबै बुझ्न सकिने
काठमाडौं । के तपाई घर, सवारी साधन, अचल सम्पति कर्जा लिने तयारीमा हुनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने तपाईले आफु नजिकैको बैंक तथा वित्तीय संस्था धाउनु नपर्ने भएको छ । अब..
काठमाडौं । प्राइम कमर्शियल बैंकले कन्काई विकास बैंकलाई गाभ्ने भएको छ । आज बुधबार २ बैंकबीच यस सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा प्राइमका तर्फबाट अध्यक्ष उदयमोहन श्रेष्ठ र..
नेपाल क्लियरिङ हाउस र ‘सक्षम’बीच सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) र युकेएडको एक्सेस टू फाइनान्स (सक्षम)बीच सम्झौता भएको छ। प्रोग्रामसँग कनेक्टआइपिएस ई पेमेन्ट प्रणाली प्रवद्र्घन गर्न, नेश्नल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपिआई) लागू गर्न तथा सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी..
१००, ५०० र १००० दरका नक्कली नोटको बजारमा विगविगी, कसरी चिन्ने सक्कली नोट ?
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा नक्कली नोटको विगविगी हुन थालेपछि सक्कली नोट कसरी चिन्ने उपाय सिकाएको छ। १००, ५०० र १००० रुपैयाँ दरका नोट चिन्ने उपाय सिकाएको हो। एक हजार दरका..
सूर्या लाइफले १२ प्रतिशत बोनस शेयरपछि ७० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने
काठमाडौं। सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले असार ११ गते ११ औं वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ। साधारणसभाले हाल कायम चुक्ता पुँजी एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँको १२ प्रतिशतका दरले बोनस शेयर दिने..
नेप्सलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनको अनुमति पायो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स (नेप्स) लाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सेवा संचालनको अनुमति दिएको छ। भुक्तानी सम्वन्धि कार्य गर्ने संस्थारसंयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति बमोजिम नेप्सले बिद्युतीय..
२५ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरको तयारीमा
काठमाडौं । २५ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाने तयारीमा छन् । वाणिज्य बैंक, फाइनान्स, विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मर्जरमा जाने तयारी गरेका हुन् । मर्जरका लागि कतिपय..
काठमाडौं । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले लगानीकर्तालाई बम्पर लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले ७९ दशमलव ७९ प्रतिशत बोनस शेयर र ४ दशमलव २० प्रतिशत नगद लाभांश गरी ८३ दशमलव..
विद्युतीय कार्डबाट भुक्तानी गर्दा छुट नै छुट
काठमाडौं । विद्युतीय कार्डबाट भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत छुटको पाइने भएको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा भुक्तानी..
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको गत आवको नाफाबाट बम्पर लाभांशको प्रस्ताव
काठमाडौं । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को मुनाफाबाट आफ्ना शेयरधनीलाई आकर्षक लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको मंगलबार साँझ सम्पन्न ९९ औं बैठकले..
अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको एटीएम नचल्ने, नयाँ कार्ड लिनु पर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको एटीएम कार्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यदि हो भने तपाईले प्रयोग गरिरहेको पुरानो भिसा डेबिट कार्ड अब नचल्ने भएको छ । भिसा सेक्युरिटी गाइडलाइन्स तथा नेपाल..
काठमाडौं। नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच भुक्तानी सम्बन्धि सम्झौता भएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषका विभिन्न भुक्तानी कारोबारहरु पनि क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको विद्युत्तीय भुक्तानी प्रणालीहरुमार्फत् हुुने गरी सम्झौता..
अब बैंकका एटिएममा नेपाली भाषा मै पैसा झिक्न सकिने
काठमाडौं । अब सबै बैंकहरुले आफ्ना एटिएम (अटोमेटेड टेलर मेसिन)मा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले बैंकहरुलाई ३० दिनभित्र सम्पूर्ण एटिएममा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्न..
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गतवर्षको तुलनामा तरकारी र दालको मूल्य घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चैत महिनामा औसतमा मूल्यबृद्धि ४.४ प्रतिशत रहेको छ..
काठमाडौँ । ताप्लेजुङमा हवाई दुर्घटनामा परी निधन भएका नेपाली सेनाका जमदार अर्जुनकुमार घिमिरेका परिवारलाई मेगा बैंक नेपालले बिमा बापत पाँच लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । मेगा बैंककी सीईओ अनुपमा खुञ्जेलीले..
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स को १९ औं वार्षिक साधारण सभाले गत वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई ४८.५० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष गोविन्द लाल संघईको अध्यक्षतामा..
एनएमबि बैंकले ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्वायर गर्ने
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ती गर्ने भएको छ । यसअघि प्राइम कमर्सियल बैंकसँग एक्विजिशन प्रकृयामा रहेको ओमलाई प्राइमसँग सम्झौता भाँडिए पश्चात एनएमबि बैंकले प्राप्ती गर्ने भएको हो..
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकले विभिन्न जिल्लाहरूमा थप ६ वटा शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले रोल्पा जिल्लाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका–७, तेबाङमा १३३ औँ, कैलाली जिल्लाको बर्दगोरीया गाउँपालिका–४, मुढा..
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा २ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कमाउन सफल भएको छ, जुन गत वर्षको सोहिअवधिको तुलनाभन्दा ९ दशमलव ६१ प्रतिशतले घटेको..
काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गा धितो राखेर भूमाफियाले विभिन्न १५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको पाइएको छ। भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, भूमाफिया किटान गरिएका डा। शोभाकान्त ढकाल..
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले चालु आर्थिक बर्ष तेस्रो त्रैमाससम्ममा २ अर्ब खुद नाफा कमाएको छ । बैंकले अघिल्लो आर्थिक बर्षको यहि अवधिसम्मका १ अर्ब ८२ करोड नाफा कमाएकोमा यस आर्थिक बर्ष..
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सहुलियत कर्जा अन्तर्गत स्वच्छ एवं शुद्ध खानेपानी परियोजनामा लगानी गर्ने भएको छ । बैंक, दक्षिण एशियाली महिला विकास मंच र टाटा परियोजना बीच महिला उद्यमशिलताको लागि..
मेगा बैंकको नाफा १३१ प्रतिशतले बढ्यो, कमायो १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपालले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तेस्रो त्रैमासिकको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले यो अवधिमा १ अर्ब २१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन..
भूकम्पपीडितलाई सहुलियतपूर्ण बैंक ऋण लिन थप सुविधा, के के छन् यस्ता सुविधा ?
काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण ऋण लिन भूकम्पपीडितलाई थप सहज हुने भएको छ । त्यस्तै, भूकम्पपीडितले आवास निर्माणका अतिरिक्त जीविकोपार्जनका लागि थप एउटा कर्जा पनि लिन पाउने छन् । मन्त्रिपरिषद्ले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि..
एनएमबी बैंकले बैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई १० लाख ऋण दिने
काठमाडौं । एनएमबी बैंकले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरुलाई व्यवसाय गर्नका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने भएको छ। बैंक, राष्ट्रिय युवा परिषद, र रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालबीच ती युवाहरुलाई सहज रुपमा ऋण..
काठमाडौं। नविल बैकले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा तीन अर्ब १९ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ। बैंकले गत वर्षभन्दा तीन प्रतिशतले नाफा बढाएको हो। गत वर्षको यहि अवधिमा बैंकले तीन..
स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ९ महिनामा पौने २ अर्ब नाफा कमायो
काठमाडौं । स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा १ अर्ब ७३ करोड ४४ लाख रुपैंया खुद नाफा कमाएको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा बैंकको खुद नाफा..
नेपाल बैंकमा शेयरधनीको पुँजी ३० अर्व पुग्यो
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडका शेयरधनीको पुँजी २० अर्व रुपैयाले बृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ रहेको शेयरधनीहरुको पुंजी यस वर्ष ३० अर्ब पुगेको हो।कानुनी प्रकृया पुगेपछि शेयरधनीलाई..
९ महिनामा एनएमबी बैंकको नाफा १९ प्रतिशतले बढ्यो, कमायो १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं। एनएमबी बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा गत वर्षको तुलनामा १९.९४ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ। बैंकले चैत मसान्तसम्ममा एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ। गत वर्षको यहि..
Results 1896: You are at page5of 64